Home » Lahatsoratra farany farany » Tsindrio eto raha ity ny fanambaranao an-gazety! » St. Kitts izao dia manana antony hankalazana ny fitsangantsanganana
St. Kitts & Nevis androany dia mankalaza ny fiantsoana fanokanana ny Viking Orion, sambo faran'izay raitra avy amin'ny Viking Ocean Cruises, sampana Viking Cruises. Fijanonana ofisialy amin'ny fandaharam-potoanan'ny ririnina 2021/2022, hiantso in-10 ny Viking Orion amin'ny vanim-potoana ririnina St. Kitts 2021/20-22. Ity no sambo fahefatra niantso hatramin'ny nanombohan'ny sehatry ny fitsangantsanganana sy ny fiantsoana voalohany tamin'ny taom-pilalaovana 2021/2011. Viking Ocean Cruises no zotra fitsangantsanganana lafo vidy lehibe indrindra ary voafidy ho #1 Ocean Line tao amin'ny Condé Nast Traveler's 2021 Readers' Choice Awards.
Viking Cruises tonga voalohany tao St. Kitts tamin'ny vanim-potoana 2016-17, miaraka amin'ny ranomasina Viking. Nanomboka teo dia nitsidika an'i St. Kitts ny Viking Sky, Viking Star ary Viking Sun. Ny fandraisana ny antso fanokanana ny Viking Orion dia manan-danja amin'ny areti-mifindra manerantany, satria manangana indray ny fizahan-tany amin'ny sambo. Hoy i Lindsay FP Grant, Minisitry ny Fizahantany, Fitaterana ary Seranan-tsambo: “Faly tokoa izahay mandray an'i Viking Orion androany. Ity fitsidihana ity dia tandindon'ny fifandraisana mitohy eo amin'ny Viking Cruises sy St. Kitts, mampiseho ny fahatokisan'ny Viking an'i St. Kitts ny toerana haleha. Ny fanombohana ny fitsangatsanganana maneran-tany dia mitaky antsika rehetra ao amin'ny Federasiona amin'ny anjarany mba hahafahan'ireo mpitsidika fitsangatsanganana tranainy sy vaovao hiaina ny mahasarika antsika, ny kolontsaina mavitrika, ny tantara manankarena, ny Karaiba tena izy.
Raha eny amin'ny seranan-tsambo, ny mpandeha dia hanana ny safidiny amin'ny fitsangatsanganana miavaka, "Ankatoavin'ny Dia" mba hahatonga azy ireo hivezivezy, anisan'izany ny Brimstone Hill Fortress sy National Park, Caribelle Batik, izay misy ny fomba savoka mafana. amin'ny fanaovana lamba batik dia mbola ampiasaina na ny St. Kitts Scenic Railway, ny lalamby farany sady tokana ho an'ny mpandeha any West Indies. Ny mpandeha dia afaka mankafy sy mandehandeha eny amin'ny iray amin'ireo tora-pasika tsara tarehy, South Friars na Carambola Beach Club, mitety trano Fambolena Frantsay naverina tamin'ny laoniny ao amin'ny Fairview Great House na mankafy ny zaridaina tropikaly ao amin'ny Palms Court Gardens. Afaka mandehandeha malalaka ao Port Zante ihany koa ny mpitsidika ary mankafy ny zavakanto sy asa tanana eo an-toerana avy amin'ny tsena Amina Craft Market sy Black Rocks mpivarotra na mitsidika ny fivarotana antsinjarany, fivarotana fahatsiarovana, trano fisotroana ary trano fisakafoanana manolotra sakafo eo an-toerana, Karaiba ary iraisam-pirenena.
“Tianay ny hisaotra an'i Viking Cruises noho ny fiaraha-miombon'antoka sarobidy sy ny fampidirana an'i St. Kitts & Nevis amin'ny diarin'ny vanim-potoana fanokanana ny Viking Orion," hoy i Racquel Brown, Tale Jeneralin'ny St. Kitts Tourism Authority. Na dia i St. Kitts aza matetika no toeran'ny sambo fanokanana, ity fitsidihana ity dia tena manan-danja tokoa amin'ny fotoana izay iarahan'ny zotra fitsangatsanganana sy ny toerana haleha mba hananganana indray ny sehatra taorian'ny areti-mifindra manerantany. Manantena ny fiverenan'ny Viking Cruises izahay ary manantena ny fiaraha-miasa mitohy mandritra ny taona maro ho avy.
Ny Viking Orion dia mandeha sambo avy any Ft. Lauderdale, Port Everglades amin'ny dia an-tongotra 14 andro izay i St. Kitts no andro fahatelo (faha-3).